I-Nissan LEAF 2018, lo ngumbane omtsha othengisa kakhulu eSpain | Iindaba zeGajethi
Ukuba sijonga zonke iitshathi zentengiso kwiimarike ezininzi apho kuthengiswa khona iimoto zombane, ngokuqinisekileyo siya kubona kwiindawo zokuqala encinci eyenziwe nguNissan, LEAF. Esi sithuthi sombane sathengiswa ngo-2010 kwaye ukuza kuthi ga namhlanje amaJapan athathe isigqibo sokuhlaziya inkangeleko yakhe kwaye ayinike ulutsha lwesibini. Le yindlela i I-Nissan LEAF ka-2018.
Entsha I-2018 Nissan LEAF ibonelela ngokuKhangela okutsha -Iminyaka eyi-7 ihamba umgama omde-kwaye iya isiba nkulu kwaye inamandla ngakumbi. Ukongeza, yongeza itekhnoloji entsha enje ngeProPilot okanye inkqubo yokuyiqhuba apho siya kufuna kuphela inyathelo lokukhawulezisa. Ngaba siyibona ngokusondeleyo?
1 Uyilo oluhlaziyiweyo kwiNissan LEAF ka-2018
2 Injini enamandla ngakumbi kunye nokuzimela okukhulu
3 Iitekhnoloji ezintsha: iProPILOT, iProPILOT Park kunye ne-e-Pedal
4 Imodeli enamandla ngakumbi kunye nokufumaneka
Uyilo oluhlaziyiweyo kwiNissan LEAF ka-2018
Into yokuqala eya kutsala umdla wethu kuyilo lwayo olutsha lwangaphandle. Kwaye ukuba iNissan LEAF 2018 inkulu kwaye inomdla ngakumbi kunangaphambili. Nangona kunjalo, kufuneka sihlale sikhumbula ukuba ukufezekisa ukuzimela okukhulu kweebhetri, isithuthi kufuneka sibe noyilo olunonopheleyo. Kwaye le meko, ngamanye amaxesha, ayisiyiyo incasa yomthengi. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi oko Nissan LEAF 2018 umtsalane kakhulu ngaphezu imodeli yayo yangaphambili.
Ngaphakathi kwikhabhathi sifumana olunye uyilo ngokuhambelana nekhathalogu yangoku yenkampani yaseJapan. Ngokwenkampani, izixhobo ezisetyenzisiweyo zinononophelo ngakumbi kwaye zikumgangatho ongcono, kusetyenziswa izinto ezithambileyo. Ngokunjalo ivili lokuqhuba liyazuza inkangeleko entsha ihambelana kakhulu neNissan Qashqai okanye iNissan X-Trail entsha, i-SUV ethengiswa kakhulu kwicandelo. Lumka, kuba i-grill yangaphambili nayo ifunyenwe kwezi modeli.
Ngokunjalo, siya kuba nescreen sokuchukumisa esisi-intshi ezi-7 kwikhonsoli yeziko ukulawula yonke imiyalelo kwaye yongezwa ukuhambelana neenkqubo ze-Apple Car kunye ne-Android Auto, Iinkqubo ezimbini ezithi ewe okanye ewe kufuneka zongezwe kuzo zonke iimodeli ezithengiswayo namhlanje.
Injini enamandla ngakumbi kunye nokuzimela okukhulu
Injini yale Nissan LEAF entsha ka-2018 inamandla ngakumbi kunemodeli yangaphambili. Kule meko sijongane nayo Imoto ebhengeza i-150 hp yamandla (110 kW) kunye ne-injini ye-torque yayo eyi-320 Nm; Oko kukuthi, iya kutyhala ngamandla ukusuka kwi-zero. Kwakhona, esona santya siphezulu sinokufikelelwa kule moto yi-144 km / h.
Kwelinye icala, iimoto zayo zombane zixhotyiswa ngebhetri ye-lithium egcwalisekayo (baya kuba nesiqinisekiso seminyaka esi-8) sama-40 kWh. Oku kuyakwenza I-Nissan LEAF ka-2018 inokufikelela kwi-theoretical 378 km ngentlawulo enye, inani eliya kuba malunga neekhilomitha ezingama-300 kwiimeko zokwenyani.
Ngokwedatha yokutshaja, le bhetri ye-40 kWh iya kufikelela kwityala eliphezulu kwiiyure ezili-16 ukuba kusetyenziswa i-3 kW yamandla kunye neeyure ezisi-8 ukuba kusetyenziswa i-6 kW amandla. Ukongeza, Kwimo yokutshaja ngokukhawuleza, i-Nissan LEAF ka-2018 ingafikelela kwi-80% yentlawulo kwimizuzu engama-40 nje yonxibelelwano.
Iitekhnoloji ezintsha: iProPILOT, iProPILOT Park kunye ne-e-Pedal
Akunakuphikwa ukuba i-2018 Nissan LEAF ayizukuhamba neetekhnoloji ezintsha. Kwaye iya kwenza njalo ngokuthe ngqo nge-3 eya kuma ngaphezulu kwazo zonke ezinye. Eyokuqala ngu Inkqubo yePRPILOT. Obu buchwephesha be i-autopilot apho umsebenzisi kufuneka 'ayeke' ivili lokuqhuba kunye neephedali. Kwaye kukuba kwezi meko inkqubo iya kuthatha ukuqhuba kwaye iya kuhlala igcina isantya esingaguqukiyo kodwa ihlala ithathela ingqalelo izithuthi ezingaphambili, kunye nemigca yendlela ejikeleza kuyo.
Okwangoku, inkqubo yokupaka ezenzekelayo ikwadlala indima ephambili kule Nissan LEAF ka-2018. Itekhnoloji iyabhaptizwa njenge IproPILOT Park kwaye iya kuthatha ulawulo lwesithuthi xa kupakwa. Ngaphantsi kwamagama enkampani uqobo: "obu buchwephesha buza kuthatha ulawulo lwayo yonke indlela, ukukhawulezisa, ukuqhuba iziqhoboshi kunye nokukhethwa kwezixhobo ukukhokela ngokuzenzekelayo imoto kwindawo yokupaka."
Okokugqibela, siya kuba ne-e-Pedal. Kwaye le Nissan iqinisekisa ukuba umqhubi emva kokwenza lo msebenzi kwipaneli esembindini, Ungaqhuba kuphela kunye namafutha namafutha. Oku kuya kuthathela ingqalelo inqanaba loxinzelelo kuye. Ke uya kukhawulezisa, waqhekeza okanye kancinci uyeke.
Imodeli enamandla ngakumbi kunye nokufumaneka
Umboniso wenziwe eJapan, ilizwe lakhe lokuzalwa. Kwaye iya kuba lapho apho ibonakala khona kwindawo yokuqala, ngakumbi ngakumbi kwinyanga ezayo ka-Okthobha. Kwezinye iimarike - kubandakanya iYurophu- iza kungena NgoJanuwari 2018. Amaxabiso awaqinisekiswanga ngalo mzuzu. Kodwa ngokwephepha Pocket-Lint, ingaqala kwi-23.600 euro, Ixabiso libiza ngaphantsi kwabakhuphisana nabo.
Okwangoku, iNissan iqinisekisile ukuba Ekupheleni kuka-2018 iya kuba nohlobo olutsha lweNissan LEAF 2018. Kwaye oku kuya kuba namandla ngakumbi kunye nebhetri enokuzimela okukhulu. Ngoku, inkampani isishiyile ifuna ukwazi ngakumbi. Ke njengoko umhla usondela, siya kuba nolwazi oluthe kratya kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Nissan LEAF 2018, lo ngumbane omtsha othengisa kakhulu eSpain
Kutheni le nto ikhibhodi yeQWERTY inobeko olunje